cilmiga bulshada (Social sciences) (علوم اجتماعية) Dhowr laamaha waxbarashada ka mid ah oo darsa xaaladaha dadka iyo saamynta ay ku. Kitaabka cilmiga bulshada ee fa salka laba — ad ee waxbarashada dadka wa awe yni wuxuu i su- gu Jiralix qa yb ood 00 kala a h: . Ca sharada badankood. Halkan waxaa ka helaysaa waxaad u baahantahay si aad sida ugu fiican uga faa ‘iidaysatid shanta mawduuc ee cilmiga bulshada ee aan kuu soo xulnay. 1.
Author: Marisar Tygor
With Product You Purchase Subscribe to our mailing list to get the new updates! Hannaanka ama wareega ay maraan labadooda. Waa cilmiga rogroga si qoto dheerna u daraaseeya xiriirka gaarka ah ee ka dhexeeya dadka iyo waxa ka dhalan kara ee bulsshada bulshada ah ee lagu kala duwan yahay ee bulsho kastaana u gaarka ah xilliguna uu bedelo, u fiirsiga bulshava ah iyo daraasadda habdhaqanka qofka oo ugu dambeyn lagala soo baxayo heerka uu gaarsiisan yahay horumarka iyo dib u dhaca bulsho kasta.
Ol-olehaas waxaa hoggaaminaayey feylasuuf Auguste Comte Notify me of new comments via email. Tan hore waa maaddo ka mida felsafadda, taas oo falanqaysa gundhiga jiritaanka shayga, dhacdada ama waxa markaasi saaran masraxa dood akademiyeedka.
Category:Cilmiga bulshada – Wikipedia
Ka billaw midka u sarreeya oo hoos uga sii soco. Ka hor inta aan gudaha u galin, waxaan rabaa in aan idin la wadaago xog ku saabsan in cilmibaaris walba ay marto laba bylshada Felsafadda Cilmibaarista Casharkii saddexaad waxa aynu ku soo baranay xeerarkii laga dejiyey ilaalinta xogta iyo macluumaadka cilmibaarista. Ereyada qaar baa cusub oo muhiim ah — lagana yaabo inaadan aqoon.
Dhisidda aragti sharxid ku saabsan xogta ama macluumaadka Uruurinta xog ama macuulmaad saafi cilmigga, si aad u tijaabiso aragti sharxiddii hore.
Laashin Iyo Hal abuur. Waxa maadooyinkan ka mid ah: Wixii dheeraad ah, akhri buuggaagta hoose: Halkan waxa ku yaal warbixin macallinkaaga u gaar ah, markaa adigu uma baahnid inaad adeegsatid. Dhanka kale, dareentus baarineedka waxaa adeegsada cilmibaareyaasha iskuul fekerka togannidda iyo mad-habka itusoo itaabsii Positivist and Empiricist.
Cilmiga bulshada waxaa saameyn ku yeeshay, sida ku dhacay culuum farabadan, kacdoonkii dhanka warshadaha, waxaa batay muhiimadda la siinayo cilmigan iyo goobaha uu taabanayo oo aad u tiro bateen ayaa waxaa dhacday in dhinacyo kala duwan cilmiiga u farcamay, waxaana faracyadiisa ka mid ah:. Muuqaalka Akhri Wax ka bedel Wax ka bedel xogta Itusi taariikhda.
Casharkii lixaad waxa aynu ku baranay iskuul fekerka tarjumidda Interpretivism. Bulshadu waa noole dharaaraha uu adduunka joogo la kulma dhalasho, koritaan, qaan-gaadh, gabaw iyo dhimasho yadoo ay ugu wacantahay sida ay sunnada Rabi ku dureersantay.
Samfunnsfag somali | Cilmiga bulshada
xilmiga Qalabka shaqada Maxaa meeshaan la xiriiro Isbedelada la’xiriira Soo geli file bogagga khaaska ah Linkiga daaimka ah Macluumad ku saabsan Qaybta caddeynaha Boggaan soo xigo. Dhinaca kale, haddii la yidhaahdo indheer-garad ayaad tahay, maan-dheeri ayaa Alle kugu mannaystay ugu danbayn waxa laga fishaaba waa sida lagu tilmaamay.
Ku soo dhowoow!
Tusaale ahaan, haddii uu macalinku ama waalidku ilmaha yar ku celceliyaan saaqid ayaad tahay, waxa uu kolka danbe dhab u noqonayaa saaqid, haddii la yidhaahdo tuug baad tahay, kolka danbe falkii ayaa uu ku kacayaa.
Fasiraadda xogta ama macluumaadka. Ku celcelinta ilaa aad la timaaddo gunaanad conclusiontaas oo aan ka baxsaneen moorada beeninta Falsifiability. Waxaad dhaqso u ogaanaysaa in mawduuc kastaa u qaybsamayo mawduuc hoosaadyo bulshaad. Twitter LinkedIn Facebook Google.
Leave a Reply Cancel reply Enter your comment here Markaad dhammaysid hal mawduuc, u gudub midka xiga. Hadaba, muhiimadda ballaaran ee cilmigani leeyahay oo aad u farabadan, anagu waxaan ku soo koobaneynaa qodobadan:.
Kaydka sawirrada bildearkiv waxaad ka helaysaa sawirro badan oo qoraal bulhada faahfaahinayaa la socdo. Si kale u dhig, hoos ka soo cilmiba, kor u soco.
Dhanka kale, ujeedka dareentus baarineedka waa tijaabinta aragti jirtay, iyada oo la adeegsanayo xog ilqabatineedka. Magaca Ibnu Khaldun waa mid bari iyo bogax ba ka dhacay. You are commenting using your Twitter account. Taa caksigeeda dareentus baarineedka waxay la mid tahay qof jooga buurta hoosteeda, kaddibna raba in uu fuulo buurta dusheeda sare. Qoralka waa la heli karaa sida uu qabo Ruqasadda Commons ee hindisidda ee marka loo eego la midka ; waxaa soo hoos gali kara qodobo kale.